Tata Genaro Ramírez: Ilay Mpiompy Namelona Indray ny Fiteny Náhuat any El Salvador · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2017 12:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, русский, 繁體中文, Português, Español
Genaro Ramírez any Santo Domingo an'i Guzmán, El Salvador. Nahazoana alalana avy tamin'ny Colectivo Tzunhejekat.
DADA Nalahelo ny nahalasanan'i Genaro Ramírez, ilay Salvadoriana izay nanonofy ny hiveloman'ny Náhuat foana, ny vondrom-piarahamonina miteny ny Náhuat any El Salvador. Izy no mpampianatra voalohany an'io fiteny io, saingy tsy ny farany, satria tamin'ny alàlan'ny asa mafy nataony, nametraka lova lehibe i Ramírez tamin'ny famelomana ny fiteny nentin-drazany.
Salvadoriana 200 fotsiny no miteny ny Náhuat Pipil, hoy ny UNESCO. Mipetraka ao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Santo Domingo de Guzmán, na Witzapan, any Náhuat, ny tena ankamaroan'izy ireo. Io no tanàna fonenan'i Genaro, izay niasàny hampitomboana indray ilay fiteny, efa maherin'ny 40 taona. Nampianatra maimaimpoana isanandro anatin'ny herinandro izy manomboka amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva. Nanana iraka izy. Amin'ny filazan'i Genaro azy manokana:
(…) Azoko hoe inona ilay babangoana tsapako hatry ny ela ato anaty tratrako. Noho izany, natsipiko teny an-tanimbolinà katsaka ireo fitaovako satria tsapako fa tsy afaka manohy toy izany intsony aho, ary […] niteny tamiko aho hoe: ‘Tsy maintsy mampianatra ny teny Náhuat aho na ho fatin'ny hanoanana aza’
Talohan'i Genaro, tsy nisy mpampianatra teny Náhuat izany. Niditra tao anaty fahanginana lavabe nanomboka tamin'ny taona 1932 ireo vondrom-piarahamonina indizeny Salvadoriana, fotoana nisianà olona 30.000, vahoaka Pipil Náhuat no ankamaroany, novonoin'ny tafika noho ny nikomiany tamin'ny tsy fahampian-tsakafo nandritra ilay fitroaram-bahoaka tao amin'ny firenena ny taona 1932. Fitroaran'ny tantsaha ihany koa ilay fikomiana, ary mbola ifantohan'ireo adihevitra maro ankehitriny ireo zava-nitranga, izay tsarovan'ireo nanao azy ho La Matanza (“Ny famonoana”).
Niresaka tamin'i Werner Hernández ny Global Voices, izy io izay mpikambana ao amin'ny Fikambanana Tzunhejekat, tetikasa izay mikendry ny hanaparitaka ny fiteny Náhuat amin'ny alalan'ny fitaovana isankarazany ary hampahanfatatra izany amin'ireo tompon-teny. Maneho hevitra amin'ny toe-draharahan'ny fiarahamonina indizeny Salvadoriana i Hernández, mpianatra ary namana akaikin'i Genaro Ramírez:
“Voadona [ny vondrom-piarahamonia indizeny], dia niafina izy. Novain-dry zareo ireo anarany, ny fomba fiakanjony…ny fiteniny. Mbola samy niteny [Náhuat] kelikely ny tsirairay rehefa nitsangana i Genaro, ilay mpampianatra voalohany ny Náhuat. Fantany fa teraka ho an'izany izy.”
Nanazava ihany koa i Hernández fa tsy vitan'ny hoe nahavita nanandratra indray ny reharehan'ny indizeny Pipil amin'ny maha izy azy, ny kolontsainy, ary ny fiteniny fotsiny ilay mpampianatra voalohany ny teny Náhuat, fa ihany koa, nandrodana ireo rindrina nanasaraka ny vondrom-piarahamonina Pipil tamin'ny ambin'ny firenena. Nanamboatra tetezana nifandraisana tamin'ireo any ivelany izy. Tamin'izany fomba izany no nahitan'ireo Salvadoriana hafa, tahaka an'i Werner, ny ampahany niafina tamin'ny maha-izy azy ireo:
“Nanokatra varavarana ho amin'ny fiainana mahafinaritra mampifandray ahy amiko, amin'ny maha Salvadoriana ahy io. Araka izany, araka ny filazantsika ao amin'ny fikambanantsika [Tzunhejekat] : mahita ny firenena amin'ny endriny mivaingana sy ny lafiny rehetra ireo Salvadoriana miteny Náhuat, satria afaka mahazo ny tena izy iainantsika isika, mihoatra lavitra noho ny teny.”
Ampahatsiahivin'i Werner ihany koa ny fomba maha-vavahady ny teny Náhuat hidirana mankany amin'ny tontolon'ny kolontsaina iraisan'izao tontolo izao: “Misy fahasamihafàna sasantsasany ary loko maro izay ilay teny ihany no hany ahafahana manakatra ny dikany. Tsy mitovy ny mandeha mijery dihy mirindra sy ny mamaky lahatsoratra iray momba ilay fampisehoana [noho izany] [mitovy amin'izany ihany koa] ny mamaky tononkalo efa voadika.” Nampidirina tao amin'ny adihevitra tao amin'ny firenena ihany koa io fandinihana io, amin'ny filàna ny fampiasana loharanon-karena amin'ilay fiteny nentin-drazana. “Tsy mitovy ny lanja sy ny vidiny [ara-toekarena],” hoy i Werner nanampy.
Nanainga fanahy ny andian-taranaka iray vaovao mpampianatra ny Náhuat i Genaro, nanomboka ny hafanampo ny amin'ny handraketana an-tsoratra ilay teny izy, nandrava ireo fady, ary nanao ilay teny ho fantatra amin'ireo ambaratonga ara-politika rehetra an'ny firenena:
Nihira tamin'ny teny Náhuat ho an'ny Filohampirenena i “Tata” Genaro Ramírez sy Paula López [poeta malaza izay nanoratra tamin'ny teny náhuat]
Ankehitriny, noho ny hafanampo naterak'io, misy ireo hetsika nomerika izay manampy manaparitaka ilay teny ary miaro ny kolontsaina indizeny Pipil. Misy ireo fikambanana, tahaka ny Tzunhejekat sy ny Náhuat Carriers Initiative, ireo vohikalan'ny teny toy ny Tushik sy ny pejy Facebook-ny, bilaogy Náhuat toy ny Chachalaka, ary lahatsary nampiakarina ao amin'ny YouTube:
Namela toerana tsara afaka hiveloman'ny teny Náhuat i Genaro Ramírez. “Manamarika ny fandavantenanay hanome aina ny teny ny fahalasanan'i Don Genaro,” hoy Werner Hernández mamarana azy.